That's so good, right?: အဘယ့်ကြောင့်များ…?
နေမောင်ကို မွေးခဲ့တုန်းက ဖေဖေတော်တော်ပျော်ခဲ့သည်တဲ့။ နေမောင်ရှေ့တွင် သမီးချည်းပဲကို သုံးယောက်တိတိတောင် မွေးထားခဲ့သည်ဖြစ်ရာ သားတစ်ယောက်လိုချင်လွန်းလှသော ဖေဖေသည် ဘယ်တုန်းအခါကမှ မယုံခဲ့သည့် ဗေဒင်များ၊ယတြာများကိုပင် လျှင် အတော်ကြီးယုံခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ဘုရားတွင်လည်း အကြိမ်ကြိမ်ဆုတောင်းခဲ့ရသည်ဟု မေမေကပြောပါသည်။ ထို့နောက်တွင် နေမောင့်ကိုမွေးသည်။ ဖေဖေကား ပျော်မဆုံးပြီတည်း…။
သားတစ်ယောက်မွေးရခြင်းနှင့် သမီးတစ်ယောက်မွေးရခြင်းသည် အလွန်တရာကိုမှ ကွာခြားလွန်းလှသည်ဟု ဖေဖေက ခံယူသူပင်..။ သမီးဆိုသည့်အမျိုးက အချိန်တန်လျှင် အိမ်ထောင်ကျပြီး သျှောင်နောက်ဆံထုံးပါ ယောက္ခမအိမ်သွားရမည့်သူ၊ မွေးသောမိဘများ မပိုင်ရ။ အားကလည်းကိုးလို့မရ။ တစ်နည်းအားဖြင့် သမီးတစ်ယောက်ရလာခြင်းသည် ဘာကိုမှ ကြီးကြီးမားမား မျှော်မှန်း၍မရ..။ သားဆိုသည့် အမျိုးကတော့ ထိုသို့မဟုတ် မွေးကတည်းက သက်ဆိုင်းတိုင် မိဘဖြစ်သူတွေနှင့်အတူတူနေပေးမည့်သူဟု ဖေဖေကခံယူသည်။ ကိုယ်က ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသည်…ဒီကြားထဲ အချိန်တန်လျှင် လိမ္မာသော ချွေးမလေးတစ်ယောက်ကိုလည်း အိမ်ပေါ်သယ်ဆောင်လာပေးဦးမည်။
ယောက်ျားလေးဖြစ်သောကြောင့်လည်း တစ်နေ့တွင် ဖအေ့ခြေရာနင်း၊ ဖအေရုန်းခဲ့သမျှ အလုပ်တွေ ဆက်ခံလုပ်ကိုင်ပေးမည့်သူ၊ မိဘကို သက်ဆုံးတိုင် လုပ်ကျွေးမည့် သူ….စသဖြင့် စသဖြင့်သော ခံယူချက် မျှော်မှန်းချက်တွေနှင့် ဖေဖေပါတည်း။
နေမောင် သုံးနှစ်ခွဲအရွယ် လေးနှစ်သားလောက်တွင် ခုန်ခုန်ပေါက်ပေါက် အင်မတန်ဆော့ချင်သည်။ သို့သော် ပြောစရာအချက်တစ်ချက် မှာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင် အနီးအနား အိမ်များ၌ နေမောင်နှင့် အရွယ်တူ အခြားကလေးများ တစ်ယောက်မကရှိနေသော်ငြားလည်း နေမောင် သည် သူ့ထက် သုံးလေးနှစ်ခန့်မျှသာကြီးမည်ဖြစ်သော အစ်မသုံးယောက်နှင့်သာ အတူတူဆော့ရသည်ကို နှစ်သက်သဘောကျသည်။ အရွယ်တူ ကလေးများဆော့ကစားပုံမှာ အလွန်ကြမ်းတမ်းလှသည်ဟု သူထင်သည်။ သစ်ပင်ပေါ်သို့ တက်သည်။ ငှက်ကလေးများ၊ ပုရွက်ဆိတ်ကလေးများ မြင်လျှင် ရိုက်နှက်ပစ်ခတ် နင်းခြေတတ်သေးသည်။ နေမောင်ကတော့ ညင်သာစွာပင် သွားလာကစားချင်သည်။ ပြီးတော့ နေမောင်အနည်းငယ်လည်း ကြောက်တတ်သေးသည်။ ထို့ကြောင့် အစ်မကြီး သုံးယောက်ထံသာ အသာချဉ်းကပ် ကစားလေ့ရှိ သည်။
ပထမဆုံး နေမောင်ဆော့ဖူးသည့် ကစားနည်းမှာ ရုပ်ရှင်ရိုက်တမ်းလို့ပဲခေါ်ရမလား၊ သရုပ်ဆောင်တမ်းလို့ပဲ ခေါ်ရမလားမသိ။ ထိုစဉ်တုန်းကတော့ စင်ဒရဲလားဇာတ်လမ်းဆော့ကြသည်။ အစ်မကြီးနှင့် အစ်မလတ်တို့က မိထွေး၏ အကျင့်ပုပ်သော သမီးနှစ်ယောက် နေရာက၀င်ကြကာ အစ်မငယ်ကတော့ စင်ဒရဲလားနေရာက သရုပ်ဆောင်သည်။ အံမယ်….အပြင်အဆင်တွေကလည်း ခေတ်မီသည်။ တကယ့် စင်ဒရဲလားကာတွန်းတွေထဲကလို ဂါဝန်ဖောင်းဖောင်းတွေဖြစ်စေရန် ဖေဖေ၏ပုဆိုးများကို ခါးတွင်ဖြစ်သလို စည်းနှောင်ကာ ခပ်ပွပွလုပ်ထားကြသည်။ မိထွေးသမီးများဖြစ်သူ အစ်မလတ်နှင့် အစ်မကြီးတို့ကတော့ ပုဆိုးကောင်းများ ၀တ်ခွင့်ရကြသော်လည်း စင်ဒရဲလားဖြစ်သူ အစ်မငယ်ကတော့ ပုဆိုးစုတ် နွမ်းနွမ်းတစ်ခုကိုသာ ချည်နှောင်ခွင့်ရလေသည်။
အဲ….နေမောင်ကတော့ (ဇာတ်လမ်းထဲတွင် မပါသော်လည်း ကိုယ့်ဖာသာကိုယ်ဖန်တီးကာ) စင်ဒရဲလား၏ ညီမငယ် စင်ဒရီလိုအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ခိုင်းပါသည်။ စဆော့ပြီဆိုတာနှင့် အစ်မကြီးနှင့် အစ်မလတ်တို့က ခေါင်းမော့ရင်ကော့ကာ ပုဆိုးများမရင်း အစ်မငယ်ထံ သို့ချီတက်လာကြလေပြီ။
``ဟင်..ကောင်မ ညည်းဘာတွေလုပ်နေလို့ အခုထိ အ၀တ်လျှော် မပြီးတာတုန်းဟဲ့…ကဲဟယ်´´
``ကြည့်စမ်း..ကြည့်စမ်း…ထမင်းလည်းမကျက်သေးပါလား။ သေစမ်း ကောင်မ´´
ထိုအခါမျိုးတွင် အစ်မငယ်သည် နှိပ်စက်သမျှခံရပြီး မြေတွင် ပစ်လဲဟန်ပြုကာ ငိုရတတ်သည်။ ထိုမြင်ကွင်းများ၊ အပြုအမူများနှင့် အစ်မတို့၏ ပြောဟန်များသည် ဆော့ဖန်များလာသောအခါ နေမောင့်ကို သဘောကျစေခဲ့လေပြီ။
ဒုတိယကစားနည်းကတော့ အိုးမုတ်ခွတ်များနှင့် ဟင်းချက်ကြတမ်းပင်။ ဒီတစ်ခါတွင်တော့ နေမောင်နှင့် အစ်မကြီးတို့က ဟင်းချက်သူ များလုပ်ကြကာ အစ်မလတ်နှင့် အစ်မငယ်တို့ကလာရောက်စားသုံးသူများ လုပ်ကြသည်။
``ဟဲ့…ထမင်းစားမယ်….ဟင်းမှာမယ်´´ဟု အော်ကာဟစ်ကာနှင့် အစ်မလတ် အစ်မငယ်တို့နှစ်ယောက် ခပ်တည်တည်နှင့် ဖျာပေါ်ဝင်ထိုင်လိုက်ကြလေလျှင် အစ်မကြီးသည် အလုပ်ရှုပ်နေရာမှာ မီးဖိုခန်းထဲကနေ ပျာပျာသလဲထွက်လာရဟန်ပြုကာ…
``သြော် အစ်မတို့ဘာများ သုံးဆောင်မလဲရှင်´´ဟု မေးလေ့ရှိသည်။ ဤသည်ကို နေမောင်သဘောကျမဆုံးတော့။ သို့သော် နောက်တစ်ခါဆော့ကြသောအခါတွင်တော့ နေမောင်သည် ဧည့်ခံပေးသူနေရာက ၀င်ဆော့နေနိုင်လေပြီ။ အစ်မလတ်နှင့် အစ်မငယ် ဖျာပေါ်ထိုင်ချလိုက်လျှင်ပင်…
``လာ အစ်မတို့ ဘာများသုံးဆောင်မလဲ ရှင်´´ဟု အစ်မကြီးကဲ့သို့ ချိုသာစွာလိုက်လံတုပလျက် ပြောတတ်ခဲ့လေပြီ..။
တတိယ နေမောင် ဆော့ခဲ့ရသည်ကတော့ အရုပ်ကတ်လေးများပင်တည်း။ ကတ်ထူးပြားပေါ်တွင် အရုပ်မလေးပုံတစ်ခုကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဆွဲ။ ကတ်ကြေးနှင့် ညှပ်ကိုက်ပြီးပြီဆိုလျှင် သင်သည် ထိုအရုပ်မလေး၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လေပြီ။ အရုပ်မလေးအတွက် သင်ကြိုက်သလို အင်္ကျီပုံများကို ကိုယ်တိုင်းနှင့် ကြိုက်သလောက်ချုပ်ပေးလို့ရသည်။ ပြီးလျှင် တစ်ယောက်အရုပ်နှင့် တစ်ယောက်အရုပ် ဘယ်သူ့အ၀တ်တွေက ပိုလှ ပိုဆန်းသစ်သလဲ ပြိုင်ကြရသည်။ နေမောင့်ကို ပန်းချီဆွဲတော်သော အစ်မလတ်က ဆွဲပေးကာ အင်္ကျီများလည်းချုပ်ပေးတတ်သည်။ နေမောင်တွင် အရုပ်မလေးနှစ်ယောက်တောင် ရှိလေသည်။
ဒီလိုနှင့် နေမောင့်ကလေးဘ၀က ကစားမှုများသည် တခြားသော ယောက်ျားကလေးများ၏ ကစားမှုများနှင့် မတူတော့ပဲ အခြားနားကြီး ခြားနားလာခဲ့ရတော့၏။ နေမောင် ဆော့ရန်ရည်ရွယ်၍ ဖေဖေ၀ယ်ထားပေးခဲ့သော ဘောလုံးလေးသည် ယခုအခါတွင်တော့ ဖုန်တို့အလိမ်းလိမ်း လူးကပ်နေပြီး တလောက ၀ယ်လာပေးခဲ့သော စစ်သေနတ်လေးကတော့ ဘယ်ချောင်တွင်ရောက်လို့ ဘယ်ပေါက်နေပြီ မသိရတော့ပြီတည်း။
တခြားယောက်ျားကလေးများ ဘောလုံးကန် ကစားနေချိန်တွင် နေမောင်ကား အစ်မများနှင့် မော်ဒယ်ရှိုးလျှောက်တမ်းကစားနေခဲ့သည်။
တခြားယောက်ျားကလေးများ သေနတ်ပစ်တမ်း ကစားနေချိန်တွင် နေမောင်သည် စင်ဒရဲလား ဖြစ်နေခဲ့သည်။
တခြားယောက်ျားကလေးများ စွန်လွှတ်နေချိန်တွင် နေမောင်သည် ငါးပေါင်တင်လျှင် ငါးပေါင်လုံး ခုတ်ချနိုင်လောက်အောင် ဇယ်တောက်ရာ၌ ကျွမ်းကျင် နေခဲ့လေပြီ။
ဖေဖေကား တစ်နေကုန် ရုံးတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရသူမို့ နေမောင်ဘာ ကစားနည်းတွေကို ဘယ်လိုဆော့နေလဲဆိုတာ မသိခဲ့ရှာပေ။ မေမေကတော့ အိမ်ခြံမြေပွဲစားတစ်ယောက်မို့ အိမ်တွင်ရှိတဲ့အခါရှိလိုက်…တနေကုန်နီးပါး အပြင်မှာ ရောက်နေလိုက်နှင့် နေမောင့်ကိုဂရုမစိုက်နိုင်အားခဲ့ကြချေ။ နေမောင်ကား အစ်မများနှင့် ကောင်းကောင်း အဖော်ပြုလျှက်ပင်တည်း..။
နေမောင် သူငယ်တန်းကျောင်းစတက်ရသောအခါတွင်မူကား နေမောင်၏ တခြားယောက်ျားလေးများနှင့် မတူသောပြောင်းလဲမှုတွေက ထင်ရှားလို့လာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ကျောင်းစိမ်းဘောင်းဘီအစား အစ်မများလို စကတ်ဖားဖားသာ ၀တ်ချင်သည်ဟု ပူဆာလာချေပြီကော။ မေမေကား ဖေဖေမသိအောင် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ချော့တစ်ခါ ခြောက်တစ်လှည့်နှင့် နေမောင့်ကို ဘောင်းဘီ မရရအောင်ဝတ်ပေးရ၏။ နေမောင့်အဖို့တော့ စင်ဒရဲလားလုပ်တိုင်း စကတ်ဝတ်နေကျလိုမို့ အဆန်းရယ်လို့ပင် မဟုတ်ချင်တော့ပြီ။ ဂါဝန်ဆိုသည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ကို အတန်ငယ် လှုပ်ရှားလိုက်ရုံမ၊ျှဖြင့် လေထဲ ဝေ့၀ဲသွားတတ်သည်။ နောက်ပြီး မိမိက ပြေးလိုက်လျှင်လည်း ကိုယ့်နောက်တွင် တလူလူ လွင့်ပါလိုက်လာနေတတ်သည်မှာ ဘယ်လောက်များ သဘောကျစရာ ကောင်းလိုက်လေသလဲကွယ်။ ဘောင်းဘီလိုလည်း မဟုတ်..။
သနပ်ခါးကတော့ မေမေကိုယ်တိုင်သဘောကျစွာ လိမ်းပေးသည်မို့ အထူးပြောစရာမလို။ တစ်ခုပဲရှိသည်။ နေမောင်၏ ဆံပင်များသည် အစ်မတွေလို ဖဲကြိုးလေးတွေနှင့် စည်းထားရလောက်အောင် မရှည်။ ဤသည်ကိုတော့ နေမောင် စိတ်ပျက်လှ၏။
ကျောင်းတွင်လည်း နေမောင်သည် ယောက်ျားလေး သူငယ်ချင်းများနှင့် အတူတူသာထိုင်နေရသော်လည်း သိပ်ပြီးမတည့်လှ။ သူတို့ ကစားသော အရာမှာ ဘောလုံးဖြစ်သည်။ နေမောင်လို ကြိုးလည်းမခုန်တတ်ကြ၊ နောက်ပြီး နေမောင့်မှာလို အရုပ်ကတ်တွေလည်း မရှိကြပြန်။ သူတို့မှာရှိသည်က သေနတ်များသာ။ ပြောနေကြသည့် အကြောင်းတွေကိုလည်း ကြည့်ပါဦး ပါဝါရိန်းဂျားတဲ့… ကားကျည်စိုး တဲ့…နှံကောင် ကျည်စိုးတဲ့။ နေမောင် သိလည်းမသိ ကြည့်လည်းမကြည့်ဘူး။ နေမောင် ကြည့်ဖူးသိဖူးတာတွေက စင်ဒရဲလား…စနှိုးဝှိုက် နှင့် စလစ်ပင်းဗျူတီတို့သာ။
ထိုအခါ နေမောင်သည် မိမိနှင့်ဆော့ကစားရာတွင်လည်း တူ၊ စကားပြောသော အကြောင်းအရာုတွေလည်းတူ…အရုပ်ကပ်ရှိတာခြင်း လည်းတူသော စာသင်ခန်းတစ်ဖက်ခြမ်းက မိန်းကလေးတွေနှင့် သွားရောက်ပေါင်းမိသည်။
ဘာကြောင့်မှန်းတော့မသိ မိန်းကလေးများနှင့်ပေါင်းသင်းရသည်မှာ အဆင်လည်းပြေသည်။ နေမောင်လည်း စိတ်ချမ်းသာသည်။ ယောက်ျားလေးတွေလို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းတွေလည်း မဆော့ကြဘူး အနိုင်လည်းမကျင့်ကြဘူး။ တစ်ခါတွင် နေမောင်သည် အတန်းပိုင်ဆရာမ အပြင်သွားခိုက် မနေ့ညက အစ်မလတ်ချုပ်ပေးထားသော အင်္ကျီအသစ်ကိုကြွားချင်ဇောဖြင့် မိန်းကလေးတွေဖက် ကူးလူးကာ အရုပ်ကတ်သွားဆော့သည်။ ပျော်ရွှင်စွာဆော့နေဆဲ…(…အထက်ကနှင့်အဆင်မပြေဖြစ်လာဟန်ရှိသော) အတန်းပိုင်ဆရာမ သည်စိတ်တိုတိုနှင့် အခန်းထဲပန်ဝင်လာရာ မိန်းကလေး ခုံတွေဖက် လာဆော့နေသော နေမောင့်ကို မျက်စိစပါးမွှေးစူးသွားပါသည်။
``ဟဲ့….ဟို အခြောက်ကလေး ကိုယ့်နေရာ ကိုယ်ပြန်သွားစမ်း..´´
အော်ဟစ်လိုက်သော ဆရာမ၏ အသံအဆုံးတွင် တစ်ဖက်ခြမ်းက ယောက်ျားလေးတော်တော်များများက နေမောင်အား လက်ညှိုးထိုးကာ တ၀ါးဝါးနှင့် ရယ်ကြပါတော့သည်။ နေမောင်ကတော့ ဆရာမ သူတို့ဘာပြောမှန်းပင် မသိလိုက်။
``အခြောက်ကလေး´´ဟူသော ဝေါဟာရကို သူမသိရှာ။ သို့သော် အတန်းပိုင်ဆရာမကတော့ တခြားကလေးတွေအား နေမောင့်ကို ခေါ်ရန် စကားလုံးတစ်လုံး အသစ်သင်ပေးလိုက်ပါသည်။ ယင်းမှာ အခြောက်ဟူသောစကားလုံးပင်တည်း။ ဟုတ်ပါသည် ထိုနေ့မှစ၍ တခြားကလေးတွေသ်ည နေမောင့်ကို အခြောက်လို့သာ ခေါ်ကြတော့သည်။
အခြောက်ဟူသော ဝေါဟာရကို မသိရှာသော နေမောင်သည် အိမ်သို့ရောက်လေလျှင် အခြောက်ဆိုတာ ဘာလဲမေးရန်အတွက် အိမ်ရှေ့ ခန်းတွင် အသင့်ထိုင်နေသော အဖေ့ကိုတွေ့ပါသည်။
`ဖေဖေ…ဆရာမက သားကို အခြောက်လို့ပြောတယ်။ အခြောက်ဆိုတာ ဘာလဲဟင်´
အရင်လိုပင် စိတ်ရှည်လက်ရှည် ကြင်နာစွာ သူနားမလည်လည်အောင် ရှင်းပြမည်ဟူသော မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်စောင့်နေခဲ့ရသော ဖေ့ဖေ့ထံမှ ပေါက်ကွဲသံသည် နေမောင့်ကို ဆတ်ကနဲ တုန်သွားအောင်အပြည့်အ၀ ကြောက်လန့်သွားစေသည်။ ဘာပြန်ပြောရမည် မသိစွာ နေမောင် ကြောင်အနေဆဲ။ ဖေဖေသည် ကုလားထိုင်မှ ၀ုန်းကနဲထလိုက်ပါသည်။ ဖေဖေ့ပေါင်ပေါ်တွင် တင်ထားသော သတင်းစာမှာ ဖျတ်ကနဲ အောက်သို့ပြုတ်ကျပြီး စာရွက်များ တစ်စစီပြန့်ကျဲထွက်လာကုန်သည်။
`ဘယ်လို….မင်း အတန်းပိုင်ဆရာမက မင်းကို ဘယ်လိုခေါ်လိုက်တာ။ အခြောက် ဟုတ်လား…´
နေမောင် ပြန်ဖြေရမလား မသိချေ။ ဟုတ်တယ်လို့ပြောရင် ဖေဖေစိတ်ဆိုးမှာလားမသိ။ မဟုတ်ဘူးလို့ညာရင်ကောင်းမည်။ သို့သော် နေမောင် ညာတာကို ဖေဖေက ကြိုသိတတ်သည်။
နေမောင့်ရင်ထဲမှ အကြောက်တရားများသည် ရင်ဘတ်ကို အတင်းဖိနှိပ်ဆုပ်ချေနေကာ လည်ပင်း၌ တစ်ဆို့ဆို့ကြီးဖြစ်လာစေ၏။ အဲဒီ အခြောက်ဆိုသော စကားလုံးက ဘာကြောင့် အဲ့လောက်တောင် ကြောက်ဖို့ကောင်းနေရတာလဲ။
မျက်ထောင့်ကြီးများနီကာ တစ်ကိုယ်လုံး တုန်ယင်နေသော ဖေဖေသည် နေမောင့်ကို ဒေါသတကြီး အော်ငေါက်ပစ်လိုက်သောအခါ နေမောင် မျက်ရည်များကျလာရတော့၏။
နေမောင် ဘာလုပ်ရမှန်းမသိအောင်ကြောက်လန့်နေပြီး နေရပ်မှာပင် ရပ်မြဲရပ်လျက် ငိုနေသောအခါ ဖေဖေသည် မသနားလာသည့် အပြင် ပိုတောင် ဒေါသထွက်လာသေးသည်။
` မင်း ငါ့ရှေ့မှာ လာငိုပြမနေနဲ့။ အေပေးလေး….မင်း အဲလို ငိုနေလို့လည်း မင်းကို အခြောက်လို့ပြောတာ။ ဘယ်လို အတန်းပိုင်ဆရာမ တုန်းကွာ။ တောက်….မင်း တိတ်စမ်း အသံမထွက်နဲ့´
နေမောင်သည် ငိုနေရာမှ အတင်းပင်မငိုအောင် ချုပ်တည်းထားရသောအခါ လည်ချောင်းကပြည့်လာပြီး အင့်ကနဲ အင့်ကနဲ တစ်ချက် တစ်ချက် လွတ်ထွက်ချင်သည်။ အတင်းပင် လက်သီးကိုဆုပ်ပြီး အသံတစ်ချက်မှ မထွက်ရအောင်နေသော်လည်း မအောင်မြင်ချေ။ အင့်ကနဲ အင့်ကနဲထွက်ချင်သည်။ ဒါကိုပင် ဖေဖေက စိတ်မကျေနပ်နိုင်။
``တိတ်ပါဆိုနေမှ မတိတ်နိုင်သေးဘူး။ ငါ မင်းကို လက်နဲ့ထိသေးလား ဟမ်..လက်နဲ့ထိသေးလို့လား….။ ငိုမနေနဲ့….ငိုတာ အခြောက်အလုပ်။ ပြောတာ မရသေးဘူးလား´´
ဖေဖေသည် ပြောရင်း စိတ်ပိုတိုလာဟန်ဖြင့် နေမောင်အား လက်ဖြင့်ရွယ်လိုက်သောအခါ ကြောက်ရွံ့စိတ်နှင့် နေမောင်သည် ထိန်းထားသမျှ လွှတ်ထွက်ကုန်ကာ အော်ပြီး ငိုမိလိုက်တော့သည်။
တက်ခေါက်သံပြင်းပြင်း တစ်ချက်ခေါက်ရင်း ဖေဖေ နေမောင်ရှေ့မှ ထွက်သွားသောအခါ သတင်းစာများ လေထဲတွင် ပြန့်ကျဲကုန်လေသည်။ ထိုအချိန်မှစကာ ဖေဖေသည် နေမောင့်ကို မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်ပါတော့သည်။ မေမေကတော့ နေမောင့် အိပ်ကာနီးတွင် တိုးတိုးလေး လာမှာရှာ၏။
``သား…..နောက်နေ့ကစပြီး သားမမတွေနဲ့ မဆော့နဲ့တော့နော်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆော့ ကြားလား၊ မဟုတ်ရင် သားဖေဖေရိုက်လိမ့်မယ်´´
သို့သော် ဘယ်လောက်ပင် အစ်မတွေနှင့် မဆော့ဖို့ ထိန်းထားထိန်းထား တစ်ခါ တစ်ခါတွင်တော့ နေမောင်သည် ဖေဖေ မရှိဘူး အထင်နှင့် အစ်မများနဲ့ သွားဆော့တတ်သည်။
နေမောင်၏ အရုတ်ကဒ်အင်္ကျီလေးများမှာ လှပဆန်းသစ်သောကြောင့် အစ်မများက ချီးကျူးပြီး ဆော့နေခိုက်မှာပင် ရုတ်တရက်ဆိုသလို နေမောင် ဆောင့်ဆွဲလွဲခေါ်ခြင်းကို ခံလိုက်ရတော့၏။
`ဟယ်….ဖေဖေ´ ဟူသော အစ်မများ၏ အသံများနှင့်အတူ နေမောင်၏ ခြေထောက်ပေါ် ကျလာသည်က ခပ်စပ်စပ် နာကျင်မှုတစ်ခု..။
``အဲ့ဒီ အရုပ်ကဒ်တွေနဲ့ မဆော့ပါနဲ့လို့ ငါမင်းကို ပြောထားတာ မရဘူးလား´´
ဖေဖေ တစ်ခါပြောပြီးတိုင်း ကြိမ်လုံးက နေမောင့်ခြေထောက်ပေါ် တစ်ခါကျသည်။
`နောက်တစ်ခါ ကစားဦးမလား၊ ပြောစမ်း…..နောက်တစ်ခါ ကစားဦးမလား´
ထိုစဉ်ကတည်းကပင် နေမောင်၏ တီထွင်ဖန်တီးမှု ဥာဏ်များသည် ရိုက်ချိုးခြင်းခံခဲ့ရလေသည်။
ဖေဖေ့ရှေ့တွင်ဆိုလျှင် အစ်မများကစားသလို ကြိုးခုန်တမ်းဆော့ချင်ပါသော်လည်း ဘောလုံးကန်ပြရသည်။ အိုးမုတ်ခွက်တမ်း ကစားချင်သော်လည်း သေနတ်များနှင့် အလုပ်ရှုပ်ဟန်ပြုပြရသည်။ ခုနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေးတစ်ယောက်သည် မိမိပြုလုပ်ချင်သော အရာများကို မလုပ်ရဘဲ ဟန်ဆောင်ကာ စိတ်မပါသော အလုပ်များကို လုပ်နေရသည်မှာ စိတ်ထဲ နာလွန်းလှပါသည်။
သို့သော် နေမောင် မည်မျှပင် ဖေဖေရှေ့ ကျောင်းကတခြားယောက်ျားလေးတွေလို နေပြနေပြ ဖေဖေကတော့ အပြစ်ရှာရန်အသင့် ဖြစ်နေတတ်သည်။
`မင်းလမ်းလျှောက်တာ ဖင်လှုပ်ပြီးလျှောက်မနေနဲ့ ခွေးမသား..´´ဟုဆိုကာ နေမောင့်ကို ခြေထောက်နှင့် လှမ်းကန်တတ်သည်။
`စကားပြောတာကိုက အခြောက်လိုလို ဂန်ဒူးလိုလိုနဲ့…ပြန်ပြင်ပြောစမ်း ဟေ့ကောင်´ဟုဆိုကာ သူစိတ်ကျေနပ်မှု မရမခြင်း နေမောင့်ကို အတင်းခပ်မာမာ စကားဆိုခိုင်းတတ်သည်။
အိမ်တွင် နေမောင် လုံးဝမပျော်တော့ပါ။ ဟုတ်ကဲ့… ကျောင်းတွင်ရော နေမောင် ပျော်ရသည်လား..။
အလယ်တန်းကျောင်းတွင် သူသည် နေမောင် မဟုတ်တော့ပြီ။ အခြောက်သာဖြစ်သည်။ ဘယ်ယောက်ျားလေးကမှ သူ့ကို စကားကောင်းကောင်း မပြောသလို တစ်ခုခု ရယ်စရာဖြစ်လာလျှင်လည်း သူ့ကိုသာ ၀ိုင်းရယ်ကြသည်။ နေမောင်သည် ယောက်ျားလေးများဝိုင်းတွင် အခုထိ ၀င်မဆံ့။ ကျောင်းတွင် သူအနိုင်ကျင့်ခံရသည်။ သူဘာလုပ်လုပ် ပြောစရာက ဖြစ်ကိုဖြစ်နေသည်။ ဥပမာ…ကျောင်းတွင် အတန်းထဲ၌ သင်္ချာတစ်ပုဒ်တွက်ခိုင်းသည်ဆိုပါစို့…ပြီးသူ အရင်လာပြဆိုတော့ နေမောင် အရင်ပြီးသည်မို့ သွားပြသည်။ ဤသည်ကို ယောက်ျားလေးဘက်က အော်၏။
`သောက်ခြောက်….ပြီးပြီဆိုပြီး မာန်တက်ပြမနေနဲ့။ အခြောက်က အခြောက်ပဲ…ယောက်ျားစစ်စစ်ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး´တဲ့။
ဆရာမကလည်း ဘာမှပြန်မပြော။ ရယ်ချင်သလိုလိုနဲ့ နေမောင့်ကိုသာကြည့်နေခဲ့ပါသည်။
အဘယ့်ကြောင့်မှန်းတော့ မသိ…နေမောင်သည် ဥာဏ်ကောင်းလှသည်။ အတန်းထဲတွင် အမြဲလိုလို ပထမရသည်။ သို့သော် မည်သူကမျှ သူ့ကို အထင်မကြီး၊ သူ့ဥာဏ်ကောင်းမှုအတွက်လည်း သူ မကျော်ကြားချေ။ အလွန်စာညံ့သော ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဆိုလျှင်ပင်…
`ငါတို့က စာတော့မတော်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားစစ်တယ်။ လောကမှာ ယောက်ျားစစ်ဖို့လိုတယ်´ဟုပင် ပေါ်တင်ကြီးလာပြေသည်။ နေမောင် မခံချင်စွာ ပြန်ပြောမိသည်။
`အေး….ငါလို အခြောက်တောင်တော်နေတာ နင်တို့တွေက ယောက်ျားစစ်စစ်ဖြစ်ပြီး ငါ့လောက်တောင် မတော်ဘူးမဟုတ်လား´
`ဟား ဟား….ငါတို့က တော်ချင်တော် မတော်ချင်နေ…နင့်လို မျိုးမစစ် နှစ်ပိုင်းတစ်ပိုင်း မဖြစ်တော့ရင် ပြီးတာပဲ´ဟု ထိုသူက အနိုင်ပိုင်းကာ ထွက်သွားပါသည်။ ထိုနေ့က နေမောင် မျက်ရည်ကျမိ၏။
ဖေဖေသည် သူ အဆင့်တစ်ရသည့်အတွက် ဘယ်တုန်းအခါကမှ မချီးကျူးခဲ့သော်လည်း တစ်လမ်းကျော်မှ ယောက်ျားပီသလှကာ မိန်းကလေးတွေကို တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်တွဲတတ်သော အောင်အောင်ဆိုသည့်ကောင်လေးကိုတော့ အင်မတန် ချီးကျူးလှသည်။
``ကောင်လေးက လူကြီးလည်း သိတတ်တယ်။ အပေါင်းအသင်းလည်း အဆင်ပြေတယ်´´
ဒါပေမယ့် သူ ကျောင်းမှာ စာမေးပွဲကျတာ ဖေဖေဘာမှမပြောဘူး။
တလောက မိဘပိုက်ဆံ ပြန်ခိုးတာဖေဖေဘာမှမပြောဘူး။
တလောက ရန်ဖြစ်လို့ အချုပ်မှာ တစ်ညအိပ်လိုက်ရတာ ဖေဖေဘာမှမပြောဘူး။
ဘယ်တော့မဆို တစ်ယောက်ယောက်နှင့်တွေ့လျှင် ကိုယ့်ကိုနှိမ်မှာပါပဲ အခြောက်ဆိုပြီး ပြောမှာပါပဲဟု အတတ်တွက်ထားသော နေမောင်သည် ဘယ်သူနှင့်မှ အပေါင်းအသင်းသိပ်မလုပ်တော့သလို အလိုလိုနေရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငါဟာ ယုတ်ညံ့သောသူ ….ငါဟာ ရွံရှာဖွယ် အခြောက်ကြီးဟူသော အားငယ်စိတ်များ ၀င်နေတတ်ကာ လူတောလည်း မတိုးတော့ချေ။
နေမောင် ဆယ်တန်းရောက်တော့ မေမေဆုံးသည်။ မေမေ….တစ်လောကလုံးတွင် မေမေသည် သူ့ကို ဘာမှ အပြစ်မဆိုခဲ့ဆုံးလူ တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ နေမောင် ဘာဖြစ်နေဖြစ်နေ မေမေ့အပြုံးက အရင်ကလို နွေးထွေးမြဲ။ နေမောင့်ကို သားတစ်ယောက်အပြင် ဘာမှထပ်ပြီး ပိုမစဉ်းစားခဲ့။ နေမောင်သည် မေမေ၏ ထာဝစဉ်သော သားတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ အခုတော့ မေမေလည်း မရှိတော့ပြီ..။ မေမေဆုံးသွားကတည်းက ဖေဖေသည် နေမောင့်ကို စကားမပြောတော့ချေ။
နေမောင်သည် ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် အင်္ကျီဒီဇိုင်းများထွင်ရာ၌ ပါရမီပါသောသူတစ်ယောက် ဖြစ်သောကြောင့်လားမသိ အေမီဟူသော ဒီဇိုင်နာအခြောက်မတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ကာ နေမောင် သင်တန်းများတက်ဖြစ်သည်။ ဖေဖေ့ကိုတော့ အသိမပေးခဲ့။
သင်တန်းဆင်းတော့ နေမောင်အထည်ဆိုင်တစ်ဆိုင် အေမီနှင့်ပေါင်းပြီး လုပ်ဖြစ်ပါသည်။ နေမောင်၏လက်ရာများကာ ဆန်းသစ်ကာ လှပ သောကြောင့် နာမည်ရသည်။ ၀င်ငွေများ ရလာသည်။ နောက်တော့ ဘယ်လိုက ဘယ်လိုသိသွားသည်မသိဘဲ ဖေဖေသည် နေမောင် ဒီဇိုင်နာလုပ်နေတယ်ဆိုတာသိသွား၏။ ထိုနေ့ညက နေမောင် သူ၏ ပထမဆုံးသော ၀င်ငွေဖြင့် ဖေဖေ့ကို ကန်တော့ခဲ့သည်။
``မင်း ကန်တော့တာ ငါလက်မခံဘူး။ မင်းရဲ့ မဟုတ်တရုတ် လမ်းကိုမင်းပဲရွေးခဲ့တာ။ မင်းဘ၀ မင်းရွေးတာ။ ငါ့မှာ သားဆိုတာ မရှိဘူး´´
ဟု ဖေဖေက ခပ်ပြတ်ပြတ်ပင်ဆိုခဲ့သည်။ နေမောင် ဘာမှ ပြန်မပြောခဲ့ပါ။ အပြန်တွင်တော့ မျက်ရည်များ ကျမိတော့၏။
ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ဘာသာရွေးလို့ ဒီလိုအခြောက်ဖြစ်လာတာလို့ ဖေဖေဆိုလိုက်တာလား။
မျက်ရည်များက ပါးပြင်ပေါ် လှိမ့်ဆင်းပြန်သည်။
နေမောင်ရှေ့တွင် အလွန်လှပသော ညနေခင်း ပါတီတက် မိန်းကလေးဂါဝန်ဝတ်စုံတစ်ထည်က အိပ်ယာပေါ်တွင် ဖြန့်ခင်းလျက်ရှိနေပါသည်။ နေမောင်သည် အချိန်အတော်ယူကာ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးပြီ။
အရင်လို အရယ်အပြုံးများနှင့် လောကကြီးက ဘာပြောပြော ဘာမှမဖြစ်သလို ပြန်လည်တုံ့ပြန်နိုင်ဖို့ဆိုတာ…နေမောင် ဒီဝတ်စုံကို ၀တ်မှရမည်။
နေမောင်သည် ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ဂါဝန်ကို စွပ်ချလိုက်၏။ ချက်ချင်းဆိုသလို ဖေဖေနှင့် နေမောင် ဝေးကွာသွားသလို ခံစားလိုက်ရပါသည်။
သူ ဒီအချိန်ကစပြီး မိန်းကလေးလိုဝတ်တော့မည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက သူဝတ်ချင်နေခဲ့သော ၀တ်စုံ။ တစ်နည်းဆိုရလျှင် ခုနှစ်နှစ်သားကတည်းက ၀တ်ချင်ခဲ့သော ၀တ်စုံကို နောက် ၁၅နှစ်ကြာတော့မှ သူဝတ်ခွင့်ရသည်။
ကြိုးများကို လက်လျှိုစွပ်ကာ ၀င်လိုက်သောအခါတွင် ဖေဖေနှင့် ပိုဝေးသွားသလို ခံစားရပြန်သည်။ လောကကြီး သူ့ကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန် တုံ့ပြန် ဘယ်လိုဝေဖန်ဝေဖန် အပြုံးမပျက် ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့ သတ္တိလိုသည်။
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်သည် သူ့ကိုယ်သူ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟု အသွင်ပြောင်းလဲပစ်ရန်အတွက် သတ္တိများစွာရှိရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော် သူဘာဆိုတာ တလောကလုံး ပြပြီးနောက်တွင်တော့ သတ္တိများအလိုလိုရလာလေသည်။
သူ ဒီလို ၀တ်ခြင်းသည် ယောက်ျားလေးများကို မြှူဆွယ်ရန် သို့မဟုတ် လောကကြီးကို အရွဲ့တိုက်ရန်မဟုတ်။ သတ္တိရှိချင်သော ကြောင့်သာ။ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို လောကကြီးအား ချပြနိုင်ဖို့ သတ္တိလိုသည်။
နေမောင်တို့အဖို့မှာတော့ လောကကြီးကို မျက်နှာဖုံးဖြင့် မည်မျှ ကာကွယ်ထားနိုင်မည်နည်း။ လောကကြီးကို လှည့်စားနိုင်ပေမယ့်လည်း မိမိတို့၏ နှလုံးသားကို ဘယ်လိုမှ မလှည့်စားနိုင်သည်ကိုတော့ နေမောင် လက်ခံနိုင်သည်။
အခုတော့ ထိုသတ္တိကို သူဝတ်ဆင်လိုက်လေပြီ။
ဖေဖေပြောသော စကားတစ်ခွန်းကို သူ ရယ်မောချင်ပါသေးသည်။
ဟုတ်ကဲ့….အခြောက်ဟူသည် ငယ်စဉ်ကတည်းကပင် ပက်စက်လှသော ကံတရား၏ အကွက်ကျကျ အစီအစဉ်များကြောင့်သာ ရွေးချယ်ခွင့်မရှိပဲ ဖြစ်လာရသူပင်တည်း။
အဘယ်ကြောင့်များ…….သူငယ်စဉ်ကတည်းက အစ်မတွေကြား နေချင်တဲ့စိတ်တွေရှိလာရသလဲ။ သူ အစ်မတွေကိုလည်း အပြစ်မပြောပါ။ သို့သော် အကြောင်းတစ်ခုခုသည် ဖန်တီးထားပြီးသားပင်။
အဘယ်ကြောင့်များ ယောက်ျားလေးဖြစ်လျက်နှင့် ယောက်ျားလေးများပြုလုပ်လေ့ရှိသည်ဟု ပတ်ဝန်းကျင်က ပုံသေသတ်မှတ်ထားသည့် အရာများကို နေမောင် မကြိုက်ခဲ့သနည်း။ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကိုလည်း နေမောင် အပြစ်မပြောလိုပါ။ သေချာသည်ကတော့ လူတွေ မုန်းသည့်အရာကို ဘယ်လူကောင်း တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ရွေးချယ်လိမ့်မည် မဟုတ်ပေ။ ရွေးချယ်နိုင်သည့်အရာလည်း မဟုတ်ပါ။
ဘ၀တစ်ခုကို ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘဲ ရလာတော့ ထိုဘ၀တွင် ပျော်အောင်နေဖို့ကလွဲပြီး လူတစ်ယောက်သည် ဘာများ တတ်နိုင်ဦးမည်နည်း…။
Posted by Alex Aung at 7:00 AM